Xildhibaan Barkhad wuu ka weyn yahay qof qarannimada Somaliland dhaafsada baabuur
Home QORMOOYIN Xildhibaan Barkhad wuu ka weyn yahay qof qarannimada Somaliland dhaafsada baabuur
Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun waa muwaaddin reer Somaliland ah. Waa siyaasi iyo masuul qaran, waana mudanaha ugu codka badnaa xildhibaannada cusub ee Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland. Dalkiisa iyo dadkiisu waa Somaliland, waana geesi mar walba ku dhiirrada inuu si toos ah iyo si dadbanba u difaaco qaddiyadda iyo qarannimada Somaliland. Waxa codkooda ku doortay in ka badan 22 kun codbixiye oo reer Somaliland ah, waxaannu metelaa qarankiisa. Waa siyaasi iyo masuul ay u kala soocan yihiin fikirkiisa mucaaridnimo iyo mabdi’iisa difaaca qarannimada Somaliland. Haddaba, waxa isweydiin leh ma dayrkii Makka ayuu gubay haddii uu dalkiisa hooyo ka difaacay weerarrada iyo hagar-daamooyinka kaga imanaya waddanka jaar ah ee Soomaaliya?
Cidda sidaas u fikiraysa waxaan leeyahay Xildhibaan Barkhad Batuun wuu ka weyn yahay qof qaddiyadda qarannimada dalkiisa dhaafsada baabuur yar iyo lacag faro-guudkood ah oo uu maalin qudha ka heli karo gudaha waddankiisa Somaliland.
Sidaa daraadeed, bulshada reer Somaliland ayaa looga fadhiyaa inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan hadalka quudhsiga iyo gefka ku ah xildhibaanka qaranka ee soo yeedhay haweenayda Wasiirka ka ah dawladda aan iskeed Isku maamulin ee ay AMISOM ku ilaaliyaan Muqdisho oo warbaahinta la soo fadhiisatay weedho si dhaba u taabtay quluubta ummadda Somaliland.
Waxa qoray suxufi Maxamed Cabdi Cumar (Cirro)
xildhibaan barkhad jaamac batuun
Previous articleSomalia: Wasiir Khadiija oo kala noqotay gaadhigii Xildh. Barkhad
Next articleICJ oo ka hadashay Dacwadda Badda ee berri goaankeeda la sugayo